Mayelana Nathi - Pro-Lean Technology Co., Ltd.
Shayela Ukusekela +86 15361465580
Ukusekelwa kwe-imeyili enquires@proleantech.com
Milling & Turning Inhlanganisela
I-PROLEAN HUB iyinsiza yokuya ezinkampanini zobuchwepheshe kanye neziqalo ezikhiqiza ihadiwe entsha.Umbono wethu uwukuba umhlinzeki wesixazululo oholayo we-On-Demand Manufacturing.Ukufeza lokhu, sisebenza kanzima ukwenza ukukhiqiza kube lula, kusheshe, futhi kokonge izindleko ukusuka ku-prototyping kuye ekukhiqizeni.
Sishintsha imibono yakho ibe imikhiqizo ngezinqubo eziphethwe kahle.
Uma usunombono omusha,
noma into yokudala.
xhumana nonjiniyela bethu.
Ukhululekile ukuthintana nonjiniyela bethu amahora angama-24 ngosuku.Bazohlola ngokushesha ubunkimbinkimbi bephrojekthi futhi bakunikeze isiphakamiso kanye nekhotheshini.
Bese ulinda amasonto ambalwa futhi umbono wakho uzoba ngokoqobo.
Sisebenzela amakhasimende emhlabeni wonke ezimbonini ezahlukahlukene, kubandakanyaamarobhothi, ezezimoto, i-aerospace, nezimpahla ezipakishwe ngabathengi…
Ngokuhlanganisa ubuchwepheshe benethiwekhi namandla okukhiqiza angaphakathi, singakwazi ukunikeza amakhasimende ethu ukufinyelela kumanani asheshayo, izikhathi zokuhola ezilinganiselwe, ithrekhi yenqubo yokukhiqiza kanye nokuhlola okuphelele kobukhulu.
Siyakwazi ukunikeza impendulo yokwenziwa ngokushesha kumakhasimende kuyilapho sinquma izixazululo ezisebenza kahle nezingabizi kakhulu zokukhiqiza ingxenye ngayinye.
Izikhathi Zokuhola Ezilinganiselwe
Ithrekhi Yenqubo Yokukhiqiza
Ukuhlola Okugcwele Kobukhulu
Inqubo yethu yokukhiqiza iqinisekisa ukuthi amakhasimende athola isixazululo esiphelele sanoma yisiphi isidingo.Lokhu kufaka izingxenye eziyinkimbinkimbi nezinembayo, njengezingxenye ezibonayo, izingxenye zezimoto, izisetshenziswa zezokwelapha noma izingxenye ze-aerospace.
Ngemva kwenqubo yokucaphuna, sinikeza Isitifiketi Somsebenzi ukuze uqinisekise izinto ezifanele.Isistimu yethu yokulawula ikhwalithi yakhelwe ukuqapha umsebenzi ngamunye, kusukela ekusetheni, ngokukhiqiza, nokulethwa ngesikhathi kumakhasimende ethu.Ngesikhathi sokuhlolwa komkhiqizo futhi usulungele ukulethwa, kuzolandelwa umbiko ogcwele wokuhlolwa koDimensional.
Izibuyekezo zenqubekelaphambili yephrojekthi yesikhathi sangempela
Umsebenzi wethu uyashesha futhi uhlelekile!Kusukela ekuxhumaneni nathi kokuqala, kuya ekulethweni okuphephile kwezingxenye, sinakekela amaphrojekthi amaklayenti.Sigcina amakhasimende enolwazi mayelana nesimo sokukhiqiza, sisebenzisa ifomu lokulandelela Iphrojekthi elithunyelwa kumakhasimende masonto onke.amakhasimende angabona ngokucacile isimo sokukhiqiza samaphrojekthi abo.
Kungani i-PROLEAN HUB
- Ukonga imali ngenqubo yethu yokukhiqiza okufunayo
- Ukuguqulwa okufushane phakathi komncintiswano (kanye nezinga eliphezulu lempumelelo)
- Ukudala izinketho zokuklama eziguquguqukayo zayo yonke imikhiqizo yakho
- Ukukunikeza ngenketho ebanzi yokukhiqiza ibhuloho
Umbono ka-Prolean uwukuba umhlinzeki wesixazululo oholayo we-On-Demand Manufacturing.
Imijovo emi-5 evame kakhulu yomjovo wepulasitiki...
6 izinhlobo zikapulasitiki ziyafa, uyazazi...
Ukubumba komjovo: Ukubuka konke Kobuchwepheshe, A...
Dizayina amaphuzu nezindlela zokuthuthukisa ze...
Ithuthukisa Idizayini Yezingxenye Zensimbi Zeshidi...
Ucingo: +86 15361465580
Ikheli: Isakhiwo A1, Fuhai Technology Industrial Park, Fuyong Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen
I-Prooess Monitoring System
Copyright © 2022 ProLean.Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot Products>
Okuyisisekelo Of Cnc Machine Ukwenziwa Kwemishini Ukwenziwa Kwensimbi Yensimbi Isevisi Yokusakaza Ngensimbi Umshini wePrototype Osayizi bokubumba bePlastiki